Tsananguro kubva kuMSB! Subpoena uye Referral Transaction kuti Inoziviswa kubva ku-e-Hurumende musi wa 28 Chivabvu | RayHaber | raillynews
mushaGENERALTsananguro kubva kuMSB! Subpoena uye Kutumira Kwekutakurwa kuchaziviswa kubva ku-e-Hurumende musi wa 28 Chivabvu
22 / 05 / 2020 GENERAL, musoro wenyaya, KUZVIDZIVIRIRA, TURKEY
masamanisi uye kutumira kuchinjika kubva kune msb mayista kuziviswa kubva kuhurumende
Ruzivo rwenhau rwakapihwa pamusoro pematanho anotorwa, zviitiko zvinoramba zvichienderera uye nyaya padanho reSecurity of National Defense, kunyanya kurwisa ugandanga, kurwisa denda reCOVID19. Irwo ruzivo rwakagadzirirwa muchimiro chevhidhiyo nekuda kweCOVID-19 denda rakagovera ruzivo rwakatevera:
19 PKK / YPG magandanga, akaedza kupinza Runyararo Spring District pakati pehusiku May 10, akazoonekwa uye asinganeti neyegamba redu commandos. Nezvino zvaitika, 66 PKK / YPG magandanga akasarudzika muRunyararo Spring Area mumwedzi wapfuura.
Ubanguranyika, zvokuongorora rubatsiro / rutsigiro mabasa akaramba kunze kuti kuenderera norugare norunyararo munzvimbo. Muchiitiko ichi, mabasa ekugadzirisa akatangwa kuitira kumisikidzwa kweHaseke neAllouk Water Plant, yakashandurwa isingawanikwe nesangano remagandanga rePKK / YPG, uye kuedza kukuru kwakaitwa kuti nzvimbo idzi dzishandiswe uye mvura yatangwa kuti ipiwe kuHaseke nenzvimbo dzayo dzekukumaruwa munaNovember 2019. Nekudaro, nzvimbo dzemvura dzinoda magetsi nekuda kwekukanganiswa nemaune uye kusakwanira kuendesa magetsi kwakapihwa nesangano remagandanga kumaodzanyemba kweRunyararo Spring Region uye ichitungamirwa neTerrorist Organisation PKK / YPG haina kukwanisa kushanda zvakakwana.
Iyo inowanzo gurwa uye yatove yakakwana magetsi yakadzivirira matsime emvura muRasulayn neTel-Abyad, kunyanya iyo Allouk mvura chirimwa, kubva pakushanda zvakakwana, zvichikonzera dambudziko remvura mudunhu, hupenyu husina magetsi nemvura mumamiriro ekunze munguva yechando, kushushikana kukuru kune vanhu vemudunhu uye Aive nematambudziko.
Nekuda kweiko kuedza kukuru kwevashandi vedu uye nekubatirana pamwe neRussian Federation, gumi chete megawatts makumi manomwe emakawati emagetsi zvinodiwa zvedunhu aya akapihwa kubva muna Kubvumbi 1, 2020, uye mazhinji eTel-Abyad neResulayn tambo dzemagetsi pamwe nekutsiurwa zvakagadziriswa.
Pasinei magetsi kuti kukwana nokuda kwokudzvinyirira kwomunhu PKK / YPG gandanga sangano uye kakawanda kuchekwa, yakachena mvura zvinodiwa vanhu vaigara Wire Repair uye Haseke, akabatsirwa kubva Allouk mvura zvivako Zvimwe matanho, vave akasangana kubva March.
Nekuda kweizvozvo, iyo ajenda, iyo inoda kubatsirwa kubva kuCovidien-19 hutachiona hwehutachiona sangano PKK / ypg'n, mvura mudunhu Hasakah inoratidza chokwadi cheanonzi chakanganiswa neTurkey.
Pakurwisa ugandanga mberi ane risina kumiswa uuraye kusvika kumba uye kunze. Huwandu hwemagandanga hwakarerekerwa munzvimbo dzose dzinoshanda kubva musi wa1 Ndira wa1445.
Mumwedzi wokupedzisira, 24 svikiro-pamwero uye 2 pamwero mukuru akavhiyiwa rwaiitwa muno nokuda pokugara nzvimbo PKK / KCK gandanga sangano. Mumabasa ari kuenderera mberi, magandanga zana nemakumi matanhatu vakasarudzika mumwedzi wapfuura; 104 anti-tangi pfuti, 5 antiairlines pfuti, 2 sniper pfuti, 3 muchina pfuti, 2 vana pfuti, 26 mabhuru, 46 ma disonators, 104 anti-ndege mfuti, 3200 mwenje maoko mfuti, makumi matatu 3700 roketi launcher ammunition, 30 Kg. C-88 putika fuma; 80 Kg. ammonium nitrate yakabatwa; 4 EYPs yakaparadzwa pamwe nemakumi matatu nemashanu emiriri emakombi. 340 nzvimbo, matumba, mumapako uye dzokuchengetera, zvakanga yakawanikwa kuti kushandiswa nemagandanga, vakaparadzwa uye akaita unusable.
Nekuda kwe izvo zviyero uye mashandiro anoitwa mumutsetse wemuganho kurwisa kutengeserana kubva kune zviwanikwa zvemari zvePKK / KCK masangano emagandanga, 110.000 mapaketi emidzanga, 72 kg yemishonga, 98.000 mapiritsi emishonga uye pfuti dzevacheche gumi dzakabatwa mumwedzi wapfuura.
Pamusoro pezvo, vanhu vanosvika makumi mana nevaviri, avo vaibatanidzwa mukuyambuka miganho zvisiri pamutemo, vakabatwa mumwedzi wapfuura, uye vanhu gumi nemakumi mapfumbamwe nevashanu vakavharwa / kusundidzirwa kumashure isati raspberry yapfuura. Pakati vanhu ava, 533 nhengo DAESH TO vakanga vabata, uye 10.298 nhengo PKK / PYD-YPG nemagandanga sangano mapfumo.
Pamusoro peLibya, sezvakambotaurwa, chinangwa chedu ndechekuti; Pasi pehutungamiriri uye hwevaridzi vevaRibhiya, yaisimbisa kutendeka kwenzvimbo uye kubatana kwenyika, ichifukidza vese vagari vemuLibya pasina musiyano; kubatsira mukuumbwa kweRibhiya yakazvimiririra, yakasununguka uye yakabudirira. Mundima iyi, iyo Turkish Armed Forces vashandi kuramba kurovedza zvechiuto uye Consultancy kutsigira UMH, ivo chepamutemo mumiririri Libyan vanhu kuzivikanwa UN, mukati yechinangwa bilateral zvibvumirano nemasaini maringe U / A mutemo.
Nezve kubuda kweCCIDID-19, kune rumwe rutivi, zvidzidzo zvinodiwa zvinoitwa mukati mekuyera kwekutambudzika kunobudirira, uye kune rumwe rutivi, zvirongwa zvedanho rekugadzirisa zviri kuitika.
Muchirevo chechinyorwa ichi, zvakarongwa kuti kuraswa kuchatanga kubva musi wa 31 Chivabvu, masamanisi atanga kubva musi wa5 Chikumi, uye ma summons emauto abhadharwa anotanga kubva musi wa20 June. Zvakabuda wokusarudza uye kupatsanura pakati mitoro pasi ainge atumirwa achapiwa zvakaziviswa pamusoro e-hurumende musi 28 May 2020.
Izvo zvakakosha kuti mapato anosungirwa apedze kubvunzurudza mubvunzo we "COVID-19" kuburikidza ne-e-Hurumende mazuva mana zuva risati ratumirwa, uye kuita bvunzo dze "Kovid-19" muzvikoro zvehutano zvavanotungamirwa. Nekuda kweCOVID-19 kubuda; Kuti kubvisa njodzi pakusvibiswa uye kuderedza kuonana, kwema vose zvivabatsire muitiro vachaitwa kubva e-Government, kunze madikanwa nyaya, hapana akavhiyiwa uto chichaitwa panguva mapazi zvechiuto. Vagari vedu vagokwanisa kuwana ruzivo rwakadzama kuburikidza neInternet account yedu.
Kubatanidza FETÖ mukudyidzana pamwe nemasangano akakodzera; kwakanyorwa anodzokororwa nokutsunga muchiedza mashoko matsva, zvinyorwa uye mashoko. Semhedzisiro yeongororo yakaitwa mukati mechiyero ichi; Kubva musi wa15 Chikunguru 2016, huwandu hwevashandi 19.495 vakadzingwa muTurkey Mauto. Iyo yekutonga uye yekutonga maitiro e4.682 evashandi ari kuenderera.
Turkish Armed Forces, vari kugadzirira kuita yavo inobudirira, chaiita uye kuremekedzwa zvinodiwa; kudzivirira uye kuchengetedza nyika yedu; Nokutenda, moyo murefu uye chibayiro, akatsunga kuita chero basa raakapiwa.
8 ngoro yekutengesa ngoro yeBursa Tram line ichaziviswa nokukurumidza
Rail Indasitiri Ratidza Nhoroondo Itsva Ichaziviswa MunaJune
8 vanhu vakasunungurwa muTÜDEMSAŞ basa, 13 vanhu vakatumirwa kudare
Dzidzisai Crash 2 Mechanic Inotumirwa kuKurthouse
Ship Shipment and Administration Ongororo kuMalatya
TCDD Regional Manager Sivri First Train Kununurwa kubva Gökçekısık Station
3 TCDD Vanhu Vakasungwa muYHT Crash Ishamiswa kuDare
Mapurisa anorondedzera nezvenyaya iyi "yekurova muimbi Gülşah Erol"
7 Service of Highways Yakapiwa neE-Government, 84,6 Million Pounds Yakachengetedzwa
Mugetsi paNyika njanji, Istanbul-Ankara High Speed ​​Railway…
Marmaray, iyo ichaita kutiza kwayo kokutanga gore rinouya, yakatanga kutakura vatakuri kubva kuPendik
CHINOKOSHA: Ndege 1 nemetrorobus kubva kuMay 05.00'den yakabviswa!
EpttAVM Mask Kugoverwa Kunoshandurwa kune E-Hurumende! Saka, Sei Tenga E-Hurumende Yemahara Mask?
Peace Peace Area
Turkish Armed Forces vashandi
Nhasi munhoroondo: 23 May 1927 1042 ndiyo "State Railways uye Ports ...
Nhasi Munhoroondo: Chivabvu 8, 1944 Amasya Celtek mine State yekuwedzera kudiwa kwemalahle…
Nhasi munhoroondo: 23 May 1927 1042 ndiyo "State Railways ...
Kutanga kokutanga kubva Kemalpaşa OSB Kubva Ege Seramik